.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ငါသေလို့ရတယ် (FlashSong)
သူငယ်ချင်းအားလုံးပဲ မိုးကဗျာ ခုရက်ပိုင်းမအားလို့ သီချင်းရော ဘလော့ရော မတင်တာကြာသွားပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ သူငယ်ချင်းတွေ အပျင်းပြေနားဆင်လို့ရအောင် FlashSongလေးတစ်ပုဒ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
auto လာနေရင်အသံတွေဆူနေမှာစိုးတဲ့အတွက် အောက်မှာ Play ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်မှ
သီချင်းလာအောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပါစေ။
FlashSong Link >>> ငါသေလို့ရတယ်
Download Link >>> ငါသေလို့ရတယ်
Posted by FlashSongCrazy at 12:48